နန်းသီရိလွင်| November 26, 2012 | Hits:52
9 | | မိုးထိ-မိုးမိတောင် တနိုင်တပိုင် ရွှေတူးသမားများ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်ရရေး ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်းက ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
နီကယ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ အကြောင်းပြချက်မရှိ လစာဖြတ်ခံနေရ
ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးမှု ပဋိပက္ခ ကြီးထွားလာနိုင်
SSA တောင်ကုန်း အစိုးရတပ် သိမ်း
အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ရေး ညှိနှိုင်းမှု ထိရောက်မှု မရှိသေး
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ရာဇာ November 26, 2012 - 7:36 pm	မြန်မာပြည်က အခြေအနေကလဲ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားလို့မရပါလားနော်….ဟိုကဖိ..ဒီကထောင်း နဲ့ ကြာလာရင် အဲဒီလူတွေအားလုံး အဆိုးဘက်ကိုရောက်ပြီး ဒုစရိုက်သမား တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာဘဲ….
Reply	ုkolattkklphado November 30, 2012 - 10:40 pm	မိုးထိမိုးမိအဖွဲ့ကိုကျောက်တံခါးမြို့မှာတွေ့လိုက်၇သေးတယ်—အခုတော့—